| ०:३५:३३ मा प्रकाशित
वि.सं.२०७७ साल माघ ३० गते । शुक्रबार इ.स.२०२१ फेब्रुवरी १२ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । माघ शुक्लपक्ष । तिथी– प्रतिपदा,२४ बजेर ११ मिनेट उप्रान्त द्वितीया । नक्षत्र–धनिष्ठा,१४ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त शतभिषा । योग–परिध,२६ बजेर ३५ मिनेट उप्रान्त शिब । करण–किंस्तुध्न,१२ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त बव,२४ बजेर ११ मिनेट उप्रान्त बालव । आनन्दादिमा–धाता योग । चन्द्रराशि–कुम्भ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४५ मिनेटमा,सूर्यास्त १७ बजेर ५१ मिनेटमा । दिनमान २७ घडी ४५ पला । सोनाम ल्होसार ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ भने व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिने छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ। आर्थिक लाभ हुने काममा हात हाल्न सकिनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरू आफै किनारा लाग्नेछन् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। चुनौती चिर्दै काम सम्पादन गर्न सकिने छ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईनेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापारमा प्रसस्त आम्दानी हुनाले आर्थिक स्थिती सुदृड हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा राम्रो सफलता हात लाग्नेछ । प्रणण सम्बन्धको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक सम्पती तथा सरकारी सम्पतीको प्रयोग गर्न पाईने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- नयाँ काममा हात हाल्ने समय रहेपनि उपलब्धी भने ढिला मात्र प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको यात्राको सम्भावना रहेपनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनुहोला झन्झट हुन सक्छ । पढाईलेखाईमा समय खर्चिए पनि भनेजस्तो रिजल्ट नआउने योग रहेको छ । अरुकै काममा समय जाने हुनाले आफ्नो काम थाति रहनेछ । अध्यात्म तथा धार्मिक क्षेत्र समय खर्चिए केही लाभ हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अनावश्यक ढिला सुस्तीको चपेटामा परिने छ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिर्य घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । लामो समय देखिको प्रेममा अबिश्वास बढ्न सक्छ । पढाईलेखाईमा समय दिन नकस्दा अरुभन्दा पछी परिने छ । आफन्त तथा दिदिबहिनीसँग विवाद सिर्जना हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा आम्दानी बढाउन निकै नै समय खर्चनु पर्नेछ । खानपान तथा वाहिरी वातावरणको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा यात्रा हुनेछ । पर्यटन तथा यात्रासँग सम्बन्धीत क्षेत्रमा लगानी गर्दा मनग्गे लाभ मिल्नेछ । भौतिक सम्पतिको भरपुर प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । साझेदारी व्यवसायबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहने जोडिहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- कुनैपनि प्रतिस्पर्धामा तपाईंको नम अग्र स्थानमा आउनेछ । बिछोड भएका आफन्त हरुसँग भेट घाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आय आर्जनका स्रोतहरु बढ्नेछन् । सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मनग्गे आम्दानी हुनेछ । प्रेममा नजिक हुने योग रहेकोछ । पुराना ऋण तथा रोगबाट छुटकारा पाईने समय रहेकोछ । कुटुम्ब तथा मावली पक्षबाट सहयोग पाईनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सहकर्मिहरुलाई हराई नतिजा आफुतिर ल्याउन निकै नै मेहनेत गर्नुपर्नेछ । आफन्त तथा सन्तानको साथ सहयोग नपाईने हुनाले कामहरु सुस्त गतिमा अगाडी बढ्नेछ । प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्दा समस्या आउनेछ भने जीवन साथिसँग सामान्य कुरामा पनि मनमुटाब बढ्नेछ । लेखन तथा साहित्यको क्षेत्रमा थालिएको काम अधुरै रहनेछ । पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- मायाप्रेममा अबिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यास्त हुँदा पढाईलेखाई कमजोर रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । समाजसेवामा नाम कमाउन अली बढि नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा ईष्ट मित्रसँग टाडिएर लामो यात्रा गर्नुपर्दा मनमा बेचैन बढ्नेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – अर्थ उपार्जनका बिभिन्न स्रोतहरु जुट्ने हुनाले पछिसम्म आम्दानी हुने व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ । परिवारका साथ रहेर मिष्टान्न भोजन लिने अवसर मिल्नेछ । तपाईंले सुरु गर्नुभएको कामको दाजुभाई तथा छिमेकिबाट उच्च मुल्याङकन हुने ग्रहयोग रहेकोेछ । व्यापार व्यवसायमा भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ भने छोटो तथा रमाईलो व्यवसायिक यात्राको तय हुनेछ । आफ्नो प्रिय पात्रलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउदा मन प्रशन्न रहनेछ । विवादित विषयहरुको नतिजा तपाई आफ्नै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- समयमा होश नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। मेहनत गर्दागर्दै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न मुस्किलै पर्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्नाले पनि दुःख पाइनेछ। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। आफ्नै कमजोरीले काममा बाधा हुने सम्भावना देखिन्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भने फाइदै हुनेछ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- क्षमता प्रदशन गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडी छोडेर अग्र पंतिमा आउन सकिनेछ । मेहनेत गर्दा आटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलिले लक्ष्य तथा गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । परिवारका साथ रमाईलो वातावरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । समाजसेवामा समय दिन सक्दा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- प्रशासन तथा राज्य पक्षसँग सम्बन्धीत काम गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेकोले समयमा काम नबन्ने तथा बिभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुने योग रहेकोछ । गलत काम तथा क्रिर्याकलापलाई प्रश्रय दिनाले ईज्जत तथा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ । पढाई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने जीवन साथिसँग अनावश्यक विवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
चलचित्र ए मेरो हजुर ४ को प्रदर्शन मिति तय १० घण्टा पहिले
कांग्रेस वीपीले दियो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा शुभकामना १९ घण्टा पहिले
आज साँझसम्म बङ्गलादेशबाट पहिलो लटको मल नेपाल आइपुग्ने १२ घण्टा पहिले
महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री भट्ट १६ घण्टा पहिले
कामना सेवाको ऋणपत्र रजिष्टारमा एनआइबिएल एस क्यापिटल नियुक्त १५ घण्टा पहिले
हराएको मोटरसाइकल सवारी धनीलाई १८ घण्टा पहिले
सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ बिधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने , प्रतिकित्ता मूल्य कति ? १८ घण्टा पहिले
सर्वोच्चको फैसला कट्टेलको पक्षमा आउला ? २ दिन पहिले
तातोपानीको पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कियाे ३ दिन पहिले
आज ओलीले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यास गर्ने ५ दिन पहिले
भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान दमक नगर समितिको आठौं नगर अधिवेशन सम्पन्न १ दिन पहिले
पूर्वतयारीबिनै आगलागी नियन्त्रण गर्छन नागरिक ५ दिन पहिले
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी हुँदा ५० घर जले ६ दिन पहिले
नेपाललाई सुन्दर देश बनाउने विप्लवकाे सपना ३ दिन पहिले
महिलालाई आर्थिक रुपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा नेतृ भुसालकाे जोड १३ घण्टा पहिले
कान्छीको सम्झनामा रोमाण्टिक मुडमा देखिए एलिस र गीता ३ हप्ता पहिले
काेराेना विरुद्धको खोप लगाउनेकाे संख्या ४ हजार ५ सय नाग्यो २ हप्ता पहिले
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का, यस्तो छ कारण ? १ हप्ता पहिले
भलिबलमा भविष्य खोज्दै सुदूरपश्चिमका १७ वर्षीय विशाल २ हप्ता पहिले
प्रदेश आयोजनाका काम धमाधम हुदै २ दिन पहिले
पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट २ हप्ता पहिले
लगातार वर्षा र असिनाले गहुँबालीमा क्षति, भोकमरीको चिन्ता १० महिना पहिले
मोडलिङमा भबिष्य खोज्दै मोडल बिपना चुनारा ८ महिना पहिले
व्यास नगरपालिकामा आइपुग्यो पोर्टेल पीसीआर मेसिन ५ महिना पहिले